काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकद्वारा नेपालमै पहिलोपटक ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेकोमा ४ दिनमै मागभन्दा अत्याधिक आवेदन परेको छ। उक्त ऊर्जा ऋणपत्र जेठ ९ गते आइतबारदेखि बिक्री खुला गरिएकोमा पहिलो ४ कार्यदिनभित्रै अत्याधिक आवेदनका कारणले बिक्री बन्द गरिएको हो। एनएमबि बैंकले वार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब ५० करोड बराबरको १५ वर्षे अवधिको उक्त...
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकको १ अर्ब ५० रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज (जेठ १३ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले गत जेठ ९ गतेदेखि रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र ४%–२०९२÷९३’ निष्कासन गरेको छ। कुल इकाइमध्ये ९ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ६ लाख इकाइ (५ प्रतिशत अर्थात ३० हजार इकाइ सामूहिक लगानी...
नेप्सेमा एनसीसी बैंकको रु. ३ अर्ब ऋणपत्र सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज एनसीसी बैंकको रु. ३ अर्ब रुपैयाँ ‘९.५% एनसीसी ऋणपत्र–२०८६’ सूचीकृत भएको छ। नेप्सेको हिजो जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार एनसीसी बैंकको रु. १००० अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ ऋणपत्र सूचीकृत भएको हो। भोलिबाट यो ऋणपत्रको धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार खुल्नेछ। बैंकले गत वर्ष चैत दोस्रो साता यो...
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकले आज (जेठ ९ गते)बाट १ अर्ब ५० रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। बैंकले रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र ४%– २०९२/९३’ निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये ९ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ६ लाख इकाइ (५ प्रतिशत अर्थात ३० हजार इकाइ सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएकोसहित) को...
एनएमबि बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक लिमिटेडको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज (जेठ ६ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। एनएमबि बैंकको ‘एनएमबि ऋणपत्र ८.५%–२०८७/८८’ नामक ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म खरिद दिन पाइने धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ...
एनएमबि बैंकको रु. १.५ अर्बको ऊर्जा ऋणपत्रमा जेठ ९ बाट खरिद आवेदन सकिने
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकले आउँदो जेठ ९ गते बाट १ अर्ब ५० रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र ४%– २०९२/९३’ निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल इकाइमध्ये ९ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ६ लाख इकाइ (५ प्रतिशत अर्थात ३० हजार इकाइ सामूहिक लगानी कोषका लागि छ�...
एनएमबि बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र आज आइतबारबाट खुला गरेको छ। बैंकले ‘एनएमबि ऋणपत्र ८.५%– २०८७÷८८’ नामक ऋणपत्र आजबाट बिक्री गरेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। कुल इकाइमध्ये १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ८ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि...
काठमाण्डौ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा पदबहालीपछि कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड–१९ को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशिल बनाउने संकल्पका साथ बजेट ल्याउने बताएका...
नेपाल बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले निष्कासन गरेको ३.५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज (वैशाख ३१ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले गत वैशाख २२ गतेबाट १० वर्षे अवधिको ‘८.५% नेपाल बैंक ऋणपत्र–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ...
एनएमबि बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आउँदो जेठ २ बाट आवेदन खुल्ने
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकले २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘एनएमबि ऋणपत्र ८.५%– २०८७/८८’ नामक ऋणपत्र आउँदो जेठ २ गते निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल इकाइमध्ये १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ८ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ। सर्वसाधारणका लागि...
नेपाल बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले ३.५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज वैशाख २२ गतेबाट आवेदन खुला गरेको छ। बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘८.५% नेपाल बैंक ऋणपत्र–२०८७’ निष्कासन गरेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रको कुल इकाइमध्ये २१ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १४ लाख इकाइको...